के विजय शाही आफैले फिजाए आफै म ‘रेको यस्तो हल्ला ? – Classic Khabar
July 27, 2021 368
मंगलवार केही सामाजिक सञ्जालमा विजय शाहीको मृत्यु भएको भन्दै तस्बिर राखेर श्रद्धाञ्जली दिन थालेपछि प्रहरीले उनको खोजी गर्यो । उनी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएका थिए । मेमोरी पावरका कारण चर्चामा रहेको भनिएका विजय शाहीले गलत दावी गरेको कुरा आएसंगै उनको तिब्र विरोध सुरु भएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोट का डिएसपी टंकबहादुर शाहीले विजयको मृत्युको हल्ला झुटो भएको बताए । प्रहरीका अनुसार शाही कालिकोट महाबु गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित घरमा नै भेटिएका छन्। शाहीको घरमा पुग्दा उनी टेलिभिजन हेरेर बसिरहेका थिए। उनले पछिल्लो समय निकै त नाव भएका कारण आफूले म’ रेको प्रहरी हल्ला फिँजाएको स्विकार गरेका छन्।
Prevएमसिसि पास गरे हामी जनता यस्तो सम्म गर्न बाध्य हुन्छौ भनेर यसरि आक्रोशित भए यि युवा – भिडियो हेरौ
Nextश्रीमान श्रीमती नै शिक्षक थिए, अहिले गाउँलेहरूले नै बनाइदिए भिख माग्ने